Qomo Audience Response System yakagadzirwa muChina
HD ine maikorofoni
QRF888 vateereri mhinduro system
Musangano uye kirasi inopindirana yekupindura sisitimu inogona kukubatsira ipapo kuona kuti vateereri vako vanewe here, pasina kuburitsa chero munhu. Instant report. Students ID Auto login.Support kusvika 60 vadzidzi vari kure.
1 set QRF888 mhinduro system yaisanganisira 1 inogamuchira + 30 mudzidzi ari kure
Iyi ndiyo yakanyanya kutengesa vateereri kuremoti muQomo nemutengo wakanyanya wehupfumi.
Ongorora: Isu tinotsigira mhando yeQomo yedemo apo mukugadzirwa kwakawanda tinobvuma OEM / ODM
Mudzidzi ari kure
Yakapfava uye kabati dhizaini seIphone x
Nzvimbo-inoshamwaridzika PC zvinhu, ergonomic yepedyo kunzwa, hapana kutsamwisa paganda, yakasununguka kiyi maitiro evadzidzi.
Mabhatani akareruka pane interface
LCD kuratidza iyo iwe yaunogona kutarisa sarudzo dzemhinduro uye chimiro chesimba. Chokwadi kana Nhema makiyi, AF makiyi ekusarudza uye bhatani reruoko.
Iyo base station inobatanidza kune yako laptop kuburikidza ne USB uye inogamuchira data yekuvhota kubva kumakiyipadhi kuburikidza neredhiyo; Hapana internet kana WiFi yekubatanidza inodiwa. Iyo inoyevedza, plug uye yekutamba mhinduro.
Yekunze mbiri-bhendi antenna isina ruzivo rusipo.
Ipa nemahara inopindirana software
QVote isoftware inopindirana inoenderana nemhinduro yedu QRF888. Iine kuenderana kwakasimba, nyore interface kushanda uye akawanda mabasa. QVote software yakanangwa mukuita kwevadzidzi manejimendi, kupindirana kwekirasi, kuongorora mukirasi, kuzivisa kutumira nezvimwe.
Zvikuru sezviri pasi apa:
Tsigira mafaera kuvhura PPT/Mufananidzo uye Zviri nyore kugadzira kirasi
Zvishandiso zvakawanda muQvote nyoro menyu.
Tsigira chibodzwa dzvuku packet (chibodzwa chakamisikidzwa chega rega dzvuku packet), rombo rakanaka dzvuku pakiti (random mamakisi) kuita kuti kirasi inakidze.
Iyi software zvakare inotsigira kugadzirisa kune Dual-mudzidzisi modhi yekudzidzisa kure kana musangano
Multiple polling type
Chirevo chekukurumidza chine mhando dzakasiyana dzereferensi yako. Somuenzaniso, Excel, Histogram, nezvimwewo.
Zviri nyore kugadzirisa kune mbiri mudzidzisi modhi yekudzidzisa kure kune iyo mudzidzi mhinduro system
Normal package ndeye 1 set/katoni
Unogona kuwana bhegi remahara mukugadzirwa kwehuwandu.
Iri handbhegi rinoita kuti iwe nyore kutakura mhinduro system seti kune chero kwaungade kuita mharidzo yako.
Kutakura saizi: 430 * 324 * 195mm
Gross uremu: 3.7kgs
Zvinotevera: Audience Response Clickers yekamuri yemusangano yakagadzirwa muChina
Zvakapfuura: QRF999 Vateereri Mhinduro System
Vateereri Mhinduro Software
QRF888 data data
QRF888-vateereri mhinduro vanodzvanya kukurumidza ruzivo
QOMO QRF888 QuickGuide V1.0
QVote mushandisi bhuku
QRF888 Audience Response System Brochure